Kunzwisisa Kudiwa Chizvarwa vs Lead Generation | Martech Zone
Mugovera, Nyamavhuvhu 22, 2015 Mugovera, Nyamavhuvhu 22, 2015 Douglas Karr
Vatengesi vanowanzo chinjana mazwi ekuti chizvarwa (chinodikanwa gen) chevatungamiri chizvarwa (lead gen), asi iwo haasi mamwe maitiro. Makambani ane zvikwata zvekutengesa zvakatsaurwa anogona kuendesa ese maviri maitiro panguva imwe chete. Makambani anowanzove ne inbound yekutengesa timu kupindura chinodikanwa yakagadzira zvikumbiro zvekutengesa uye zvikwata zvekutengesa zvinobuda kuita izvo zvinotungamira zvinogadzirwa kuburikidza tungamira zviitiko zvechizvarwa.
Kana iko kushandurwa kuchigona kushandiswa pamhepo pasina kudyidzana nekambani, kudiwa chizvarwa kwakakosha mukutyaira kuziva, kuvimba, uye chiremera nezvako zvigadzirwa nemasevhisi. Kana kutendeuka kwako kuchida kudyidzana kwekutengesa, kutaurirana, kana marefu kutengesa maitikiro, kutungamira chizvarwa kwakakosha kunongedza uye kuwana inokwanisika yekutengesa inotungamira inokurudzirwa kuburikidza kusvika kumagumo.
Chii chinonzi Demand Generation
Kudiwa chizvarwa chinotyaira kuziva uye kufarira mune zvigadzirwa zvekambani uye masevhisi. Chinangwa ndechekuti kutyaira yakavharwa bhizinesi nekudyidzana kushoma nemutengi kana bhizinesi rauri kukwezva.
Panyaya yekuda kudiwa, iwe unogona kuve une hukasha mukutyaira iyo tarisiro kuburikidza neyekutengesa kutenderera uye kuvaendesa zvakananga kutendeuka.
Chii chinonzi Lead Generation
Mutungamiri wekutungamira anotyaira kufarira kana kubvunza mune zvigadzirwa kana masevhisi. Chinangwa ndicho kuunganidzwa kwekubatana kwakakodzera kuvaka hukama pamwe nekurera kusvika kuvharwa semutengi.
Paunenge uchiendesa nzira dzechizvarwa chinotungamira, iwe unogona kuve une hukasha mukuunganidzwa kweruzivo rwekuonana kuitira kuti iwe ugone kuvaka kuvimba uye kuita netariro nekufamba kwenguva. Ehezve, iwe zvakare haudi kukanganisa kana kudzora kufarira kwevatungamiriri mukuvhara bhizinesi newe. Tungamira kurovera pasi yakakosha - kunzwisisa kana lead iri yakanaka, ine bhajeti iripo, iri padyo nesarudzo yekutenga. Yakareba kutengesa kutenderera, akawanda-nhanho kubatanidzwa, uye bhizinesi kutengesa zvinoda inotungamira chizvarwa zano uye maitiro.
Maitiro acho anogona kunge akafanana, uye matekiniki anogona kutofanana pakati pemaitiro maviri aya. Semuenzaniso, ini ndichiri kungotsvaga zvechisimba kutsvaga, zvemagariro uye PR nzira dzekuvaka kuziva uye kutyaira kungave kuda kana kutungamira. Ini ndinogona kukudziridza infographic kana whitepaper iyo inobatsira kusimudzira kutungamira kana kukurudzira sarudzo yekutenga. Kana ini ndiri kuyedza kuburitsa zvinotungamira, zvakadaro, ini ndinogona kuisa zvakanyanya kusimbisa pahunyanzvi hwekambani uye nekumisidzana kwehukama pakati pemaviri marefu-nguva kungave kwakakura zvine hungwaru.
Kubudirira kana kuyera kunogona kusiyana pakati pemaitiro maviri, zvakadaro. Nekuti kuda chizvarwa, Ini ndinogona kuve ndakanyanya kutarisisa nekusvika kwekushambadzira kwangu uye neshanduko dzinoguma. Nekuti mutungamiri wechizvarwa, Ini ndinogona kuve ndakanyanya kutarisisa pahuwandu hweanokwanisa kutengesa zvinotungamira. Nepo timu yekushambadzira inogona kuve nemhosva kune chero zano, iboka revatengesi rakabatwa basa rekuvhara bhizinesi neinotungamira chizvarwa zano. Chikwata chekushambadzira chinongotarisira huwandu uye mhando yevatungamiriri vakapihwa.
Tags: kuda chizvarwakuda chizvarwa maringe nekutungamira chizvarwakudiwa maringe nekutungamirakutengesa kwakawandamutungamiri wechizvarwalead chizvarwa maringe nechidimbu chizvarwatungamira maringe nezvinodiwakutengesa kwakabuda
Ndeapi Akakodzera Ekushambadzira Bhajeti sePeresenti reRevenue?
Jun 23, 2017 pa 8: 26 PM
Yakanaka chinyorwa. Ndatenda nekujekesa mutsauko uripo pakati pezviviri!